musha More Formula One Drivers Bio Guanyu Zhou Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Guanyu Zhou Biography inoratidza chokwadi nezveNyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana. Moreso, Vanun'una vaGuanyu Zhou, Vehukama, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro, Masimbisiro uye Net yakakosha.
Muchidimbu, chinyorwa ichi chinokushandira iwe maonero akafara eHupenyu nhoroondo yeGuanyu Zhou.
Iye mutyairi wemujaho, parizvino ari kukwikwidza muFIA Formula 2 Championship yeUNI-Virtuosi Racing. Rekodhi yedu inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika panguva yaakaenda pasi rose.
Kumutsa chishuwo chako chebio yedu, heino mifananidzo yaGuanyu Zhou. Chokwadi, iyo snapshot inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi kubva pakuzvarwa kusvika mukurumbira wake.
Guanyu Zhou Biography - Tarisa hupenyu hwake kubva pahudiki hwake kusvika asimuka mukurumbira.
Iye ane mukurumbira nokuda kwezviito zvake zvinokunda. Guanyu anowanzo kupa checkered mireza kune vadiki vateveri vake mumastand. Kunze kweizvozvo, Guanyu Zhou angave mutyairi weF1 wekutanga kubva kuChina.
Kunyange zvakadaro, kune zvakawanda kwaari kupfuura zvinosangana neziso. Naizvozvo, zorora iwe uchiverenga kunonakidza kwechidimbu cheGuanyu Zhou Biography uye nyaya yehudiki. Pasina kumwe kunonotsa, ngatipfuurirei.
Guanyu Zhou Childhood Nyaya:
Kutanga, Guanyu Zhou akazvarwa paZuva remakumi matatu raMay 30. Akasvika pasi pano paSvondo yakaisvonaka kuVabereki vake vekuChina.
Mick Schumacher Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Guanyu Zhou akaberekerwa mune rimwe dhorobha rePeople's Republic of China, rinozivikanwa zvakanyanya seShanghai.
Mutambi akauya munyika mukati memubatanidzwa wevabereki vake vekuChina. Unotevera mufananidzo waamai vake nababa.
Tarirai Vabereki vaGuanyu Zhou vekuChina – Amai naBaba.
Hupenyu hwepakutanga uye makore ekukura:
Vabereki vaGuanyu Zhou vakamurera kuShanghai, muPublic Republic of China. Kubvira achiri muduku, akaratidza kuti aigona kuva mukuru.
Guanyu Zhou aigara achirota zvekunaka seMwana. Akazvivimbisa kuti achasvika pamusoro penzira yebasa yaakasarudza.
Pamakore matanhatu, kuda kwake mutambo wemijaho kwakamudya. Saka nekudaro, haana kumbopotsa zviitiko zvekumhanya paTV kana pasaiti. Guanyu Zhou akatanga kuenda kumitambo yemijaho muna 2004. Rakanga riri gore rimwe chete iro China yakapinda mumitambo yemotorsports.
MaChina vakaita Grand Prix yavo yekutanga muna 2005. Guanyu Zhou aivepo. Baba namai vaGuanyu Zhou vakabva vaona shungu dzake ndokumutsigira.
Waigona kumuona pamufananidzo pano, achitsigira zvizere Fernando Alonso munyika yake, China.
Wechidiki Guanyu Zhou anotsigira chikwata chaFernando Alonso munyika yake, China.
Saka, Guanyu akatanga karting. Zvisinei, haana kugara kwenguva refu muChina. Guanyu Zhou, pamwe nevabereki vake, vakatamira kuBritain. Kutama kwacho kwakamubvumira kutora chikamu mumakwikwi eEurope.
Guanyu Zhou Mhuri Background:
Mutyairi wemujaho wekuChina, Guanyu Zhou, akavanza kuzivikanwa kwevabereki vake. Zvakadaro, mishumo inoti mhuri iyi yakatamira kuUnited Kingdom muna 2012 uye yanga ichiita zvakanaka.
Guanyu Zhou anobva kumusha akapfuma wekuChina. Imba yake ine nhoroondo muindasitiri yemotokari. Saizvozvi ivo, kuwana upenyu hwomutambarakede yakanga isiri nyaya.
Guanyu Zhou Mhuri Kwakabva:
Dzimba remujaho weShanghai-akaberekerwa F1 inonakidza kuverenga. Kuti tizive midzi yemhuri yake, tingadai takaparadza muzukuru wake mumwe nomumwe.
Akatanga mumwe kubva kudivi raamai vake uye mumwe kubva kuna baba vake. Nekudaro, zvishoma kana kuti hapana ruzivo rwuripo nezvevabereki vake veChinese. Asi zvino, ruvara rwake uye hunhu hwake zvinoratidzira midzi yake yeAsia.
Zvinoenderana nezvinyorwa zvenhoroondo, zita rekuti Zhou rinobva kuhukama hwehumambo hwedzinza rekwaZhou.
Iro zita rine midzi yaro muMandarin (a lingua Franca muAsia). Naizvozvo, mukupedzisa Zhou's Family Origin, tinofungidzira kuti F1 mujaho ndeweHan Chinese.
Ivo iboka reEast Asia. Pamusoro pezvo, vanoumba dzinza rakakura kwazvo pasi rose, Guanyu Zhou mukwikwidzi weChinese wemitambo muShanghai. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yeGuanyu Zhou.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yeGuanyu Zhou.
Guanyu Zhou Dzidzo:
Mutyairi wemujaho akaberekerwa kuShanghai akapinda chikoro chebhodhingi kuChina asati atamira kuEngland.
Ndichiri kuUK, Guanyu Zhou akanyoresa pachikoro chepamusoro muSheffield, Yorkshire. Asi ipapo, akatamburira muchikoro sezvo akanga asingagoni kutaura mimwe mitauro kunze kweChinese.
Zvisinei nemhinganidzo yemutauro, Guanyu Zhou akadzidzira bvunzo dzeChirungu. Zvakanaka, akaita zvakanaka.
Zvakangodaro, kutora chikamu kwake kwekarting kwakakanganisa zvirongwa zvake zvekudzidza. Nokudaro, akasiya zvidzidzo zvake.
Mune imwe yekutarisa basa rake, Guanyu Zhou akabva apinda muFerrari Driver Academy mushure mekunge aonekwa neScuderia Ferrari F1 Team.
Mune imwe yekutarisa basa rake, Guanyu Zhou akabva apinda muFerrari Driver Academy.
Guanyu Zhou Kwekutanga Basa:
Mukwikwidzi wemitambo yemujaho wekuChina, Zhou, akatanga kutamba kumasere.
Pamakore gumi nemaviri, apedza makwikwi enyika muChina, akakwikwidza Strawberry Racing kuUK. Guanyu Zhou, mumazuva iwayo, akahwina Super 12 National Rotax Max Junior Championship.
Akabudawo semukundi paRotax Max Euro Challenge, achirova Lando Norris. Kwegore rake rekupedzisira karting, Zhou akapedza 2nd muRotax Max Senior Euro Challenge. Akabva atora chikamu mumakwikwi akasarudzwa eWSK Champions Cup.
Moreso, Zhou akatora chikamu muKF2 European Championship. Nekudaro, muna 2015, Zhou akatamira kuItari kunokwikwidza Prema Powerteam, achikwikwidza kuItaly Formula 4 Championship. Zhou akapedza mwaka wake wekutanga seVice-Champion uye Best Rookie.
Zhou akapedza mwaka wake wekutanga seVice-Champion uye Best Rookie.
Guanyu Zhou Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Mumhanyi wemujaho uyu aifanira kuenda kuTeam Motopark mu2016 kunokwikwidza muFIA Championship. Makwikwi eEuropean Formula 3 akaratidzira kutanga kwemakore matatu mumakwikwi.
Mushure mezvo, Guanyu Zhou akadzokera kuPrema muna 2017, kwaakanogara kweimwe mwaka. Pakuvharwa kwa2018, Zhou akasiya Ferrari Driver Academy.
Akawana chinzvimbo cheDevelopment Driver yeRenault F1 Team sechikamu cheRenault Sport Academy driver chirongwa, chave kuzivikanwa seAlpine Academy.
Mushure mezvo, Zhou akarova nzvimbo yake yekutanga yeF2 pole kuSilverstone. Akava mutyairi wekutanga wekuChina kuita kudaro.
Gare gare, Zhou akawanawo nzvimbo yechitatu mumujaho paPaul Ricard. Ona zvakanakisa zvekutanga Zhou F2 pole chinzvimbo paSilverstone. Yuki tsunoda akauya 3rd.
Ari kuSilverstone, akarasikirwa nezvinzvimbo kune waaishanda naye uye akahwina mujaho Luca Ghiotto. Zvakare kumutyairi wenzvimbo yechipiri, Nicholas latifi. MuAbu Dhabi, akapedzawo wechitatu neanokurumidza makumbo muRace 1.
Mwaka wa2019 wakaona Zhou achiita yake FIA ​​Formula 2 Championship debut. Akazove nekugamuchirwa kudzoka kuUK nechikwata cheBritish, UNI-Virtuosi Racing.
Zhou akapedza wechinomwe mumwaka wake wekutanga, achitora Anthoine Hubert Mubairo weiyo yepamusoro-yekupedzisa Rookie.
Mwaka wa2019 wakaona Zhou achiita yake FIA ​​Formula 2 Championship debut.
Guanyu Zhou Biography- Simuka kune mukurumbira:
Mushure mekuratidza kuzvipira kwake, mutoro uye hunyanzvi, muna 2020, vakasimudzira Guanyu Zhou kuita pamutemo Test Driver weAlpine F1 Team. Kutevera Renault's rebranding seAlpine.
Hazvizivikanwe pakutyora mold, basa raZhou seMutyairi Wekuyedza rinomuita mutyairi wekutanga kubva kuChina kutora chinzvimbo cheFormula 1 mukati mechikwata chevagadziri.
Achitungamira FIA Formula 2 Championship yeUNI-Virtuosi Racing, Guanyu Zhou akabva aita nhangemutange yake yeFormula 1. Guanyu Zhou akaita mukurumbira wake mukuru paAustria Formula 1 Grand Prix muna Chikunguru 2021 yeAlpine.
Zhou akasimudza vhiri raFernando Alonso's A521 yekutanga Yemahara Dzidzira chikamu. Asina nzvimbo yake muna 2022, Alfa Romeo akamusimudza kuti abatane Valtteri Bottas kuchikwata chemwaka unotevera. Ona Guanyu Zhou inoshamisa nguva dzemujaho pano.
Ndiani Guanyu Zhou Dating?:
Zvinoenderana nemarekodhi edu, Guanyu Zhou anogona kunge asina kuroora uye haana kumbobvira aita chero munhu. Kubva munaNovember 2021, Guanyu Zhou's haasi kufambidzana nemunhu.
Mashoko ane chekuita naVaZhou haasati abuda pachena. Zvinyorwa zvehukama hwake hazvina zvazvinoreva nezvehukama hwekare. Kunze kwaizvozvo, achiri mudiki.
Hupenyu hweMhuri yeGuanyu Zhou:
Panguva ino yehupenyu hwedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yemusha waGuanyu Zhou. Zvamazvirokwazvo, angadai asina kuzviita pasina tsigiro yakatsiga yemitezo yemhuri yake yakapfuma. Kubatana pakati pavo kwakamubatsira kuti ave wekutanga weChinese F1 mutambi.
Nezve Vabereki veGuanyu Zhou - Baba:
Zita rababa vaGuanyu Zhou harisati razivikanwa. Zvakadaro, isu tinoziva kuti iye muridzi webhizinesi. Baba vaGuanyu Zhou vanoita zvekutengesa nekugadzira mota. Hupfumi hwake hunomupa mukana wekutsigira Mwanakomana wake, Guanyu Zhou, mumazuva ake ose ekuenda-karting.
Kunyangwe baba vaGuanyu Zhou vaitarisira kuti mwanakomana wavo achaita bhizinesi saiye, pamwe nemukadzi wake, Marilena Latifi, vakamutsigira pamatanho ese ebasa rake.
Mufananidzo wababa vaGuanyu Zhou vakapfuma.
Nezve Vabereki veGuanyu Zhou - Amai:
Saizvozvo, zita raamai vaGuanyu Zhou harisati razivikanwa. Zvakangodaro, hapana kupokana nezvekuti Guanyu Zhou anoda sei amai vake. Kusvika parizvino anakidzwa nerudo rwake, rutsigiro uye kutarisirwa kwaamai mumakore ake ekukura.
Iye nemurume wake vakasangana kuChina ndokuchata. Mushure mezvo, vakatamira kuUnited Kingdom kumafuro akasvibira.
Mufananidzo waGuanyu Zhou naamai vake.
About Guanyu Zhou Siblings:
Sezvambotaurwa, Guanyu Zhou haambope ruzivo nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwepachivande. Hatizive kuti Guanyu Zhou ane mukoma here kana Sister.
Pane mukana wekuti haanawo vanin'ina. Nekudaro, dai akadaro, vangadai vakamutsigira kuti asvike kuF1 racing.
Pamusoro peGuanyu Zhou Hama:
Mutyairi weChinese F1 anofanira kunge aine mamwe Guanyu Zhou. Anofanirwa kuve nenhengo dzemhuri shoma shoma kunze kwenhengo dzemhuri yenyukireya dzababa, amai nevana.
Guanyu Zhou ane vana babamunini, vana tete nana sekuru. Asi, zvakare, isu hatina zvinyorwa zvekuti ivo ndivanaani kana zvavanoita.
Sezvineiwo, mutyairi wemujaho wekuChina ane hunhu hunoyemurika. F1 mujaho muenzaniso. Guanyu Zhou ane zviitiko zvakawanda zvinonakidza kana asiri mujaho remijaho. Ari kunyanya kushanda pasocial media.
Guanyu Zhou anoshandisa mapuratifomu ake ekuti arambe aine hukama nevateveri vari kukura. Yake Instagram account chete ine vanopfuura 140k vateveri. Guanyu Zhou ane mukurumbira zvakare nekukunda majeti.
Zhou anofarira kutamba basketball, gorofu nemitambo yemavhidhiyo.
Anowanzopa checkered mireza kune vateveri vake vechidiki mumira. Anoda Imbwa uye anofarira kufamba neshamwari. Kudya kwake kunosanganisira Kudya Kusina Veg. Pamusoro pezvo, Zhou anoda kutamba basketball, gorofu nemitambo yemavhidhiyo.
Guanyu Zhou Mararamiro:
Mutyairi weF1 wechidiki kusvika parizvino ave nekutanga kunoshamisa. Hapana mubvunzo kuti akazviwanira mamiriyoni emadhora. Kunze kwezvo, achine kodzero kupfuma yevabereki vake.
Nekuda kwemari yakawedzerwa yaGuanyu Zhou, anofanirwa kurarama hupenyu hwemutambarakede.
Zhou akazviwanira zvivakwa zvishoma, kunze kwezvivakwa zvakati wandei zvevabereki vake. Guanyu Zhou parizvino anogara kuLondon, United Kingdom, nemhuri yake.
Mujaho wekuChina, Guanyu Zhou, akawedzera kumuunganidzwa wake weMota. Akapihwa makiyi e2016 Infiniti Q50 Red Sport 400 itsva! Motokari inoita kunge mota yake yakanaka kusvika parizvino.
Sezvambotaurwa, Guanyu yakawana budiriro yakakosha munyika yemijaho. Huzhinji hwehupfumi hwakaunganidzwa naZhou hunobva mumakundano nemakwikwi aakatora chikamu.
Zvakare, mari yake, sekureva kwemutambi wenhau, inosvika madhora mashanu emamiriyoni. Muhoro wake wepagore, maererano neZipRecruiter, ndeye $5 pagore. Zvakadaro, tinotarisira kuti achawana zvakawanda mumwaka wake unotevera.
Nekuda kwemukurumbira waakawana, mhando dzakasiyana dzakatsigira Zhou. Anofanira kunge akagadzira mari yakanaka kuburikidza nechibvumirano chebvumirano nePuma, Hublot, Fanatec, Playseat, nevamwe vazhinji.
Zhou anoramba ari mumiriri weKS Sze & Sons, Iye Yega Jeweler kuHong Kong Society kweanoda kusvika zana. Iye zvakare anomhanyisa Instagram account yake kutsigira mhando.
Collage yeHublot newachi yavo yemaoko, inotsigirwa naZhou.
Guanyu Zhou Untold Chokwadi:
Zhou ari kuita semumwe wevatyairi vemijaho vane mukurumbira munyika dzemitambo. Akahwina mibairo yakawanda uye anorumbidzwa nekuda kwekuedza kwake.
Zvino, ngationei zvimwe nezve tarenda remujaho Guanyu Zhou's biography uye hupenyu hwake hwehunyanzvi. Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezve Shanghai-akazvarwa F1 mujaho.
Chokwadi #1: Chitendero cheGuanyu Zhou:
Mukuita, chitendero chingabatanidza nzira dzakasiyana-siyana dzokukurukura, dzakadai seminyengetero kana kuti kufungisisa. Kunyange zvazvo zvitendero zvichisiyana, zvine chitendero chimwe chete uye mitemo yetsika. Chiverengero chakanyanya kukosha chevanhu veChinese maBuddha.
Nekudaro, kusiyana nevanhu vazhinji vekuChina, Guanyu Zhou muKristu. Anotenda muna Mwari vatatu-muna-mumwe uye neMwanakomana wake, Jesu Kristu.
Chokwadi # 2: Gakava:
Muna Mbudzi 2021, Alfa Romeo akasaina Guanyu Zhou mwaka wa2022, achimuita wekutanga mutyairi wechiChinese muFormula One. Achatsiva Antonio Giovinazzi kuAlfa Romeo uye otanga kushanda naValtteri Bottas.
Kunyange vazhinji vari kupemberera kukwidziridzwa kwaZhou kuF1, Antonio akaita kusafara kwake zvakajeka maererano nechisarudzo. Mushure mekusimbisa kuti aisazoenderera mberi neAlfa Romeo mumwaka unotevera, mutyairi weItaly akaenda kune yake social media kuti ataure maonero ake.
Giovinazzi akataura nezve iyo Formula One yaive nezve tarenda, njodzi, kumhanya, mota, uye manzwiro. Asi hwaivawo hutsinye nokuti mari painobatanidzwa, unyanzvi hahuna chinokonzera chisarudzo chipi nechipi.
Akajekesa chimiro chake pamusoro pekuti ndiani waakapa mhosva yekurasikirwa nechigaro uye akatenda vateveri vake nenhengo dzechikwata nekumutsigira parwendo rwake.
Chokwadi #3: Ngowani yaGuanyu Zhou:
se george russell, Lando Norris, Sergio Perez naAlex Albon, Zhou inobvumira MDM Magadzirirwo ekuenzanisa Helmet yake. Moreso, Guanyu Zhou's helmet pendi ndeye DiR Dhizaini. Mucherechedzo wemavara wengowani yake ndeyegoridhe uye yepepuru ine sirivha chrome.
Kusarudzwa kwemavara ndiko kutanga, mukurangarira Kobe Bryant. Kobe aive chidhori chaZhou. Iyo Helmet zvakare inotora mashoma mashoma kubva kune yake yapfuura ngowani magadzirirwo.
Pamusoro peHelmet yaZhou ine patani yezita rake mukati mehari yemaruva. Pfungwa iyi inobva patsika dzechiChina. Padivi, Helmet yaGuanyu Zhou ine denga rose reShanghai. Inomiririra taundi raakaberekerwa.
Guanyu Zhou's 2021 Helmet ine yakazara Shanghai denga, inomiririra dhorobha rake.
Chokwadi #4: Munhu ane mukurumbira muChina:
KuPeople's Republic of China, Guanyu Zhou anga ari kukurudzira kwakadai. Kusvika parizvino akaisa China kumusoro kwemumhanyi manera eSports.
Guanyu Zhou akaiswa pachinyorwa chevanonyanya kufarirwa Racing Drivers. Vakaisawo Zhou pachikwata chevanhu vane mukurumbira vakazvarirwa muPeople's Republic of China.
Guanyu Zhou Biography pfupiso:
Pasinei nekukombwa maitiro akasiyana maererano nekusimudzirwa kwake kuF1, Guanyu anga ane nyasha nezvazvo. VaZhou vatenda avo vakatenda mavari uye vataura nezvekuzadziswa kwezviroto zvavo.
Tinovimba kuti, kunze kwekuve wekutanga mujaho wechiChinese muF1, Guanyu anoisa mamwe marekodhi mumazuva anouya. Sezvineiwo, kukurumidza kutenderera kuburikidza neGuanyu Zhou Biography uye Childhood Nhau, isu tave neruzivo rwese rwaunoda kuziva nezvake.
Ichi chikamu chichavhenekera paGuanyu Zhou bio, wiki, Zera, Birthday, Networth, Affairs, Height, huremu, dzinza, Vabereki, Vanin'ina, Veukama, Simuka mukurumbira, Networth uye zvimwe zvakawanda zvinounganidzwa mutafura inotevera.
Zita rizere: Guanyu-Zhou
Zuva rekuzvarwa: 30 Chivabvu 1999
Age: (23 makore nemwedzi 1)
Nzvimbo yekuzvarirwa: Shanghai, China
Basa: Mutyairi wemujaho (Formula One)
Debut mwaka:	 2019
Nhamba yemotokari: 3
Kupedzisa kwakanakisa: 6 muna 2020
2021 timu: UNI-Virtuosi
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Gemini
Hobbies: Kufamba neshamwari, basketball, gorofu nemitambo yemavhidhiyo.
kukwirira:	 5 ft 7 mu (1.70 m)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (5)
Dzinza / Race: Han Chinese
Social Media: Facebook (Guanyuzhou33), twitter (gyzhou_33) uye instagram(gyzhou_33)
Sezvatinotenderedza Guanyu Zhou's Biography uye Hupenyu Hwehucheche Nyaya, tinofungidzira kuti unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Guanyu Zhou aigara achirota hukuru semwana. Akazvivimbisa kuti aizosvika pamusoro penzira ipi neipi yebasa yaaizosarudza.
Nhasi, kurota kunoitika zvishoma nezvishoma. Zvakadaro, Guanyu Zhou ane mhuri inotsigira uye inomubvumira kutandanisa zviroto zvake. Saizvozvi, anenge achida kuvaita kuti vadade.
Pamusoro pezvo, gadziriro yake yakasangana nemukana wakakodzera nguva weChina kupinda mumutambo wemijaho muna 2004. Vakatanga mutambo weChinese Grand Prix muShanghai. Sezvo zvakadaro, kubvira ipapo, kufarira kuri kukura muSport.
Sarudzo yaGuanyu Zhou ingangoita kuti mutambo wemujaho wemujaho ukure mukurumbira muChina. Tinovimba wakaverenga zvinonakidza mukati meBio nyaya yedu. Bhalisa kune zvimwe zvedu Formula One Drivers 'Biography. Kurongeka uye mhando yepamusoro-soro ndiyo masiginecha edu.